Naannoo Amaaraatti haqqeefi garaa kaasaan namoonni shan du'an - BBC News Afaan Oromoo
Sababa haqqeefi garaa kaasaan namoonni shan du'uu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa beeksiisee jira.
Dhukkubbichi Ebla 18, 2011 irraa kaasee Godina Kaabaa Goondar, Aanaa Xallamittitti akka jalqabe Institiyuutichatti ogeessi sodaa fayyaa hawaasaafi akkeekichaasa duraa kan ta'aan Obbo Amooyn Balaay BBC'tti himaniiru.
"Hamma ammatti godinoota sadii Kaabaa Goondar Xallamitt, Bayidaafi Wagihimiraa aanaa Abarageleetti akka dhukkubbichi umame gabbaafameera," jedhu.
Gabaasa manneen yaalafi yaala manaa manatti godhameen hanga kalee namoonni 190 ta'an dhukkuba haqeefi garaa kaasan qabamuu isaanii ogeessichi himaniiru.
"Sababa dhukkuba kanarraa kan ka'ee namoonni shan du'anirru."
Akka Amoogni jedhanitti dhukkubbichi ammatti hir'ataa dhufuus to'achuun hin dandamne.
"Haala amma jirutti Kaabaa Goondaritti to'aneera jechuun ni danda'ama. Torbee lamaan darbeeti gabaasa dhukkubsataa tokkollee nu hin qaqabne" jedhu
Ammas Abarageleetti darbee darbee ni uumama jedhu.
"Kaleessa gaabsni hin turre. Dhabataadha jechuun hin dandamu. Hojiiwwaan hojjatamuu qaban ammas hojjataamaa jiru. Al tokkoon dhabbateera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas hojii guddatu nu eegata." jechuun obbo Amoogni dubbattu.
Dhukkubbichi Kooleeraadha moo haqeefi garaa kaasa jechuun gaafii ka'eefi akkana jechuun deebisaniiru: "Haqeefi garaa kaasan sababoota garagaraan uumamuu danda'a. Baakteeriyaa, Vaayirasii, Pirootozoowaa yookiin summaa'uu nyaataafi bishaaniin mudachuu danda'a.
Wantoota haqeefi garaa kaasa fidaan keessa tokko kan ta'e baakteeriyaadha. Baakteeriyaa keessa tokko immoo kooleeraadha. Garagarummaan isaanii kana. Haqeefi garaa kaasan bal'aadha.
"Sababoota hedduun uumamuu kan danda'u haqeefi garaa kaasaan, kooleeraan immoo baakteeriyaa haqeefi garaa kaasa akka mudatu godhan keessa isaan tokko." jedhu.
Haqeefi garaa kaasan sababoota hedduun uumamuu kan danda'u yoo ta'u tokkon tokkoo isaa kooleeraadha jechaa gaabasuun garuu dogongora uumuu akka danda'u dubbattu.
Wallaansa fayyaa bilisaa jiraattoota daandiirraatiif
Dhukkubsatan kamu yeroo mallattoo haqeefi graa kaasa argu saffisaan akka buufata fayyaa dhiheenyaa isaatti argamu akka deemuu qabu ogeessichi dhaamaniiru.
Rakkoo amma uumame kana to'achuuf ogeeyyiin fayyaafi meeshaalee fayyaa gara iddoo sanitti akka ergaman dubbataniiru.